September 2, 2019 - Myitter
ကျောင်းခန်းမဆောင်ဆောက်လှူပြီး ကျောင်းအထွေထွေလုပ်သားအဖြစ် ဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုိတဲ့ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုရှင် ကျောင်းစောင့်ဝန်ထမ်းမိသားစု
September 2, 2019 Myitter 0
ကျောင်းခန်းမဆောင်ဆောက်လှူမယ်ဆိုိတဲ့ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုရှင် ကျောင်းစောင့်ဝန်ထမ်းမိသားစု ၇ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းခွဲဆုကို မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ ငန်းတေးရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ ကျောင်းစောင့်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုမျိုးဝင်းကဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ အသက်၃၈ နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ ကိုကျော်မျိုးဝင်းခေါ် အုန်းသီးဟာ ငန်းတေးအထကခွဲကျောင်းမှာ ကျောင်းစောင့်အဖြစ် အလုပ်လုပ်နေတာပါ။ ကိုိကျော်မျိုးဝင်းဟာ မိုးယံရွှေလမင်းနဲ့ မြတ်ဆုကုဋေထီဆိုင်ရဲ့ ထီစောင် […]
တစ်​ယုတ်​အနင်း​ခြေခံရလွတ်​​တော့မယ်​ မြန်မာနိုင်ငံက ဖရဲသီးများကို အမေရိကန်နိုင်ငံသို တင်ပို့ရောင်းချနိုင်တောမည် မစန္ဒာမျိုးဦးဆောင်တဲ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းက ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံတော်အဆင့် ဖရဲသီးထုတ်လုပ်မှု မြှင့်တင်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ ဂျော်ဂျီယာက ဖရဲသီးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့ကြသလို၊ လော့စ်အိန်ဂျလီမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဖရဲသီးပွဲတော်ကိုလည်း ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ […]
ထိုင်းမှာသေဒဏ်ကျခံရမဲ့ ဇော်လင်း ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကို ထိုင်းရဲကဂွင်ဆင်ဖို့ ပစ္စည်းတစ်ခုကောက်ထည့်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
ထိုင်းမှာသေဒဏ်ကျခံရမဲ့ ဇော်လင်း ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကို ထိုင်းရဲကဂွင်ဆင်ဖို့ ပစ္စည်းတစ်ခုကောက်ထည့်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် September 2, 2019 ဗဟုသုတ ထိုင်းမှာသေဒဏ်ကျခံရမဲ့ ဇော်လင်း ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကို ထိုင်းရဲကဂွင်ဆင်ဖို့ ပစ္စည်းတစ်ခုကောက်ထည့်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် လေးကိုဝိုင်းရှဲပေးကြပါဦးနော် မြန်မာပြည်သူများသိအောင် များများဝိုင်းရှဲပေးကြပါဦးနော် ဒါသက်သက်ကို ယုတ်မာတာပါ …..မြန်မာလူမျိုးဆိုရင် နှိပ်ချင်ကြတာက နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုပါပဲ…. အားလုံး […]
သိန်း ၁၅၀၀ တန် ဂျင်းကွန်ဒိုကိစ္စ ပန်ဆယ်လို ပြောပြီ… “မတရားလို့ ပြောတာပါ” …
“မတရားလို့ ပြောတာပါ” မြန်မာပြည်မှာ Customer Rightဆိုတာ ဘာများပါလဲလို့ မေးရမလိုတောင် ဖြစ်နေပြီ။ Customer is alway right အဆင့်ထိကို မပြောလိုပါဘူး။ မမျှော်လင့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Customer ရဲ့ အခွင့်အရေးဆိုတာကို ဒီနိုင်ငံကဟာတွေ ဘာမှန်းတောင် သိပါလေစပဲ။ သိန်း၁၅၀၀ ပေးထားတဲ့ ကွန်ဒိုအမည်တပ်ထားတဲ့ […]
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂ ။ ။ ကျပ်တစ်ထောင်တန် ထီလက်မှတ်များကို ကျပ် တစ်ထောင်ကျော် နှုန်းထားဖြင့် ဈေးတင်ရောင်းချနေမှုအပေါ် အရေးယူနိုင်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသအသီးသီးတွင် စစ်ဆေးရန် ရုံးချုပ်မှ ညွှန်ကြားထားကြောင်း ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာန၊ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်သန့်လွင်က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။ “ဈေးတက်တယ်ဆိုတာ သူ့ဘာသာသူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကနေ အရှုံးကာမိအောင် […]
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ခုနစ်ခု၌ မိုးကြီးနေ၍ ရေဘေးသတိပေးထားစဉ် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ယနေ့ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း မိုးလေ၀သပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်၊ မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာနက သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်သည်။ ယခုရက်ပိုင်း နေပြည်တော်၊ ပဲခူး၊ မကွေး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီးနှင့် ရခိုင်၊ ကရင်၊ မွန်ပြည်နယ် တို့တွင် မိုးကြီးနေပြီး […]
သိရဲ့သားနဲ့ အမှန်တရားပေါ်မလာတာဘာကြောင့်လဲ?ကမ္ဘာကြီးကဝိုင်းဝန်းမကူညီနိုင်ကြတော့ဘူးလား?မှန်တရားဆိုတာကြီးဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ? လိပ်ကျွန်း သူကြီး ခေါ် Phuket Mafia ကြီး နဲ့သူတို့ သားအဖတွေ ၊ သား အကြီးကောင် ကလည်း ကန် ချနဘူရီ မှာ အထူးချွန်ဆုံး ပြည်သူ့ ရဲ ဝန်ထပ်းကောင်းဆု ရထားတာနော် ။ […]
ရန်ကုန်မှာ မနေသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၆) ချက် (မှန်လွန်းပါတယ်)
အပတိရူပဒေသ ရန်ကုန် နိုင်ငံခြားမှာ အနေကြာပြီး၊ မြန်မာပြည်ပြန် အခြေချတော့မယ်ဆိုရင် တစ်ခြားမြို့တွေကို စဉ်းစားပါ။ ရန်ကုန်ကို ရှောင်ပါ။ ရန်ကုန်မှာ မနေသင့်တဲ့ အကြောင်း (၆) ချက်ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ရာသီဥတု – ရန်ကုန်ရဲ့ ရာသီဥတုက အညာဒေသထက် ဆိုးပါတယ်။ နွေမှာ ၄၀ […]
ဓါတ်ပုံမှပြောသောစကား ( သို့ ) ဆွမ်းတစ်နပ်လွတ်သောနေ့…😥😥😥
ဓါတ်ပုံမှပြောသောစကား ( သို့ ) ဆွမ်းတစ်နပ်လွတ်သောနေ့…😥😥😥 ကဲ…..ဓါတ်ပုံမှပြောသောစကား ( သို့ ) ဆွမ်းတစ်နပ်လွတ်သောနေ့…😥😥😥တို့ရေ…ငါ့ဒကာတို့ ဟိုတယ်မှာ ဝိုင်ခွက်လေးတိုက် ပန်းကုံးအစွပ်ခံပြီး စတိုင်လ်အပြည့်နဲ့ လက်ခုပ်တွေတီး သတင်းထောက်တွေရှေ့မှာ ဆွေးနွေးပြီးရင်လည်း ဒီလမ်းပေါ်ကအဖွဲ့တွေကို တောထဲကိုပြန်ဆွဲခေါ်ကြပါတော့….နော်.. မအောင်မြင်ရင်လည် တောတောင်တွေအကျယ်ကြီးဘဲရှိတယ်…လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြိုက်သလိုဆော်ကြပါ.. အဆင်ပြေရင်လည်း တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေနဲ့အတူ ဦးဇင်းတို့လက်ခုပ်တီးပြီးကြိုပါ့မယ်… […]
အသိပေးနှိုးဆော်ချက် အဖြောင့်လမ်းပိုင်း နံနက် ၆ နာရီမှ ည ၁၂ နာရီထိပိတ်ထားမည် ကော့ကျိုက်-ဇာသပြင်(အဖြောင့်)လမ်းပေါ်ရှိမိုင်တိုင်အမှတ်(၁၁/၇-၁၂/၀)ရှိပေ(၄၀)တံတားဇာသပြင်ဘက်အခြမ်းရှိကမ်းကပ်ခုံအက်ကွဲပြီးကြမ်းခင်းကြံ့ခိုင်မှု အားနည်းလာပါသဖြင့် အဆိုပါ တံတား အပေါ်ပေ(၆၀)ဘေလီသံဘောင်တံတားအစားထိုးတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အဆိုပါလမ်းအပိုင်းအား (၂.၉.၂၀၁၉)ရက်နေ့ နံနက် ၆နာရီမှ ည ၁၂ နာရီအထိ ပိတ်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါလမ်းအပိုင်းအားပိတ်ထားစဉ်ကာလအတွင်း ယာဉ်ကြီးများ(အတက်/အဆင်း)အနေဖြင့် သံလွင်တံတား-ကော့ကျိုက် […]